नयनराजका कथाहरुको मञ्चन- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
नयनराजका कथाहरुको मञ्चन
पुस १, २०७२ मधु शाही
काठमाडौं — आख्यानकार नयनराज पाण्डेको लेखनका विशेषताहरू केके हुन् ? धेरैले उनका उपन्यास र कथाहरू पढेर अनुमान लगाउन सक्छन् । यति बेला भने उनले लेखेका कथाहरूको नाटकीय मञ्चन हेरेर सहजै र छिटै उनको लेखनीबारेको जिज्ञासा मेटाउन सकिन्छ ।
मण्डला थिएटरमा बुधबारदेखि नयनराजको कथा संग्रह ‘चकलेट’ मा रहेका तीन कथाको मञ्चन सुरु भएको छ ।
‘कथा एक्स्प्रेस’ रंगमञ्चीय प्रस्तुतिको निर्देशन आशान्त शर्माले गरेका हुन् । अस्मिता खनालले पनि उनलाई निर्देशनमा सघाएकी छन् । नाटकमा नयनराजका ‘सुकमेल’, ‘खेल’ र ‘महानगर’ कथा समावेश गरिएको छ । समाजका ससाना घटनाक्रमलाई सूक्ष्म दृष्टिकोणसहित केलाउन सक्ने लेखकको खुबीलाई नाटकमा रूपान्तरण गरेर आशान्तले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । उनले लेखकको भाव र कथाको मर्म समाएर दृश्यमा न्याय दिने प्रयास गरेका छन् । मञ्च सजावट सामान्य लागे पनि कलाकारको प्रस्तुतिले नाटकलाई दमदार बनाएको छ ।
करिब डेढ घण्टा लामो नाटकमा तीन वटै कथाको संयोग पाइन्छ । कतै पनि दर्शकले दिग्दारी अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सुरुमा रमाइलो र रसिलो ढंगले दर्शक हँसाईहँसाई नाटकका दृश्यहरू परिचालित भए पनि अन्तिममा भने कथाको मूलसार भेटिन्छ । यस हिसाबले नाटकमा रोमाञ्चकता र मार्मिक सन्देश दुवैको सम्मिश्रण पाइन्छ ।
‘सुकमेल’ कथामा खोक्रो आदर्शभित्र लुकेको यौन मनोविज्ञानलाई पर्दाफास गरिएको छ भने ‘खेल’ कथाले राजनीति वा सत्तामा पुग्न नसक्दा उत्पन्न भएको प्रतिशोध भाव प्रस्तुत गरेको छ । ‘महानगर’ कथाको अधिकांश भाग चाहिँ कमेडी शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न पात्रले आ–आफ्नो स्वतन्त्र खुबी प्रदर्शन गरेर दर्शक हँसाएका छन् । फिल्म हलमा टिकट काट्न पुग्दा र फिल्म हेरेर निस्कँदासम्म अपरिचित व्यक्तिसँग भएको कुराकानीमै कथा केन्द्रित छ । त्यो मान्छे को होला ? नाटकको रहस्य यसैमा छ ।
नयनराजका तीन वटै कथा रहस्यमय लाग्छन् । दर्जनौं टेलिफिल्म, फिचर फिल्म, कथा, पटकथासमेत लेखिसकेका नयनराजका उपन्यास पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् । ‘उलार’, ‘लु’, ‘घामकिरी’ जस्ता उपन्याससँगै ‘निदाए जगदम्बा’ लगायतका कथा संग्रह प्रकाशनमा ल्याइसकेका उनको सिर्जनामा आञ्चलिकताको प्रचुरता अर्को विशेषता हो, नाटकले पनि यसलाई समाउने कोसिस गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमको ग्रामीण समाजदेखि सहरी जनजीवनसम्मको परिवेशमा उनले कथा रचेका छन् । निर्देशक आशान्तले कथाको मर्मलाई निकै नजिकबाट बुझेर नाटक तयार पारेको बताए । उनले कथावाचन शैली र नाटकीयता दुवैको सुन्दर संयोजन गरेका छन् नाटकमा । सूत्रधार र नाटकको दृश्यमा कुनै भिन्नता नदेखाई उनले जीवन्तता ल्याएका छन् । नाटकमा सिर्जना सुब्बा, सुलक्षण भारती, मनीष निरौला, लक्ष्मी बर्देवा, विनीता मगर, वीरेन्द्र मुखिया, सन्देश लामिछाने, आईपी आचार्य, अस्मिता, सुरज मल्लले अभिनय गरेका छन् ।
‘कथा एक्स्प्रेस’ पुस १६ सम्म मञ्चन हुनेछ ।
प्रकाशित : पुस १, २०७२ ०८:४३
भूकम्पपीडितलाई कपडा किन्न राहत रकम वितरण
पुस १, २०७२ लिला श्रेष्ठ
भक्तपुर — जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति भक्तपुरले भुकम्पका कारण पूर्णरुपमा घर क्षति भई अस्थायी आवासमा बसोबास गरिरहेका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा खरिद गर्न राहत रकम वितरण सुरु गरेको छ ।
समितिले मंगलबारदेखि सम्बन्धित नगरपालिका मार्फत भूकम्पका कारण अस्थायी आवासमा बसोबास गरिरहेका भूकम्पपीडितलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम वितरण गर्न सुरु गरेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समिति संयोजक तोयम रायाले बताए ।
भूकम्पको धक्काले जिल्लामा २६ हजार २ सय ८२ घर पूर्णरूपमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । न्यानो कपडा किन्न राहत रकमका रूपमा समितिले १३ करोड १४ लाख पेस्की सम्बन्धित नगरपालिकामा पठाइसकेको रायाले बताए ।
जिल्ला कुल भूकम्पपीडितलाई २६ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ राहत रकमको आवश्यकता पर्ने प्रशासनले जनाएको छ । भूकम्पको धक्काले भक्तपुर नगरपालिकाका ६ हजार ४ सय ११ घर पूर्णरूपमा क्षति पुगेको र अस्थायी आवासमा बसोबास गरिरहेका भूकम्पपीडित परिवारलाई ३ करोड २० लाख ५० हजार, अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकाका ३ हजार ६ सय २४ परिवारलाई १ करोड ८१ लाख २० हजार, नगरकोट नगरपालिकाका ५ हजार २ सय परिवारलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको समितिले जनाएको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका ४ हजार ६७ परिवारका लागि २ करोड ३ लाख ३० हजार, चाँगुनारायण नगरपालिकाका ५ हजार २ सय ८१ परिवारका लागि २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका १ हजार ६ सय ९९ परिवारका लागि ८५ लाख गरी १३ करोड १४ लाख रकम निकासा गरेको रायाले बताए ।
समितिले सम्बन्धित नगरपालिकाहरूलाई तत्काल ५० प्रतिशत राहत रकम निकासा गरेको समितिले जनाएको छ । निकासा भएको राहत वितरण गरिसकेपछि बाँकी रकम निकासा हुने समितिले जनाएको छ । जाडोयाम मध्यसमयमा पुगेकाले एक साताभित्र भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा खरिदका लागि राहत रकम वितरण गरिसक्न नगरपालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रायाले बताए ।
अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकाले मंगलबारबाट राहत रकम वितरण सुरु गरेको र बाँकी चार नगरपालिकाले पनि बुधबारबाट वितरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको भए पनि भक्तपुर नगरपालिकामा भने अन्योल रहेको जनाएको छ । भक्तपुर नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिने राहत रकम वितरण प्रभावित भएको छ ।
समितिले यसअघि भूकम्पपीडित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ३६ करोड ४२ लाख ३० हजार, भूकम्पबाट मृत्यु भएका ३ सय २९ जनाको परिवारलाई किरिया खर्चबापत प्रतिव्यक्ति ४० हजारका दरले १ करोड ३१ लाख ६० हजार, मत्यु भएका मृतक परिवारलाई १ लाखका दरले २ करोड ८७ लाख गरी ५३ करोड ७९ लाख १३ हजार ४ सय ९३ वितरण गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
भूकम्पको धक्काले घर पूर्णरूपमा क्षति पुगेको भनिएका भूकम्पपीडितमध्येका करिब १ सय २५ परिवारको जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको र छानबिन सकिएलगत्तै राहत रकमको विषयमा निर्णय हुने रायाले बताए ।
प्रकाशित : पुस १, २०७२ ०८:४२